Home YURUB IYO YURUB Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhammeystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius' kaas oo si fiican loogu yaqaan 'nickname'Peri". Sheekadeena Carruurnimada Ricardo Pereira Plus Xaqiiqooyinka Untold Biography Xaqiiqooyinka waxay kuu keenaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Rabitaanka Ricardo Pereira. Dhibcaha Sawirka: Premier League, marchadovapor Blog iyo Instagram.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu yahay daafaca dambeedka buuxa ee wejiga badan ee jecel inuu bam ku tuuro santuuqa, oo muujinaya awoodiisa weerarka weyn. Si kastaba ha noqotee, kaliya in yar ayaa tixgeliya taariikhda nololeed ee Ricardo Pereira taas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabista, magaciisa oo buuxa waa Ricardo Domingos Barbosa. Ricardo Pereira wuxuu ku dhashay 6th of October, 1993 waalidkiis wuxuu ku dhashay magaalada Lisbon, Portugal. Difaaca midig ee dagaalku wuxuu leeyahay asalkiisa reer Cape Verde halkaasoo hooyadiis iyo aabihiis ay ka yimaadeen. In kasta oo wax yar laga ogyahay aabaha aabihiis Ricardo Pereira, waxaa lagu yaqaanay inuu qayb weyn ka qaatay sanadihii hore hooyadiis oo saameyn weyn ku yeelatay sidii ilmo ahaan.
La kulan Ricardo Pereira hooyadiis oo saameyn weyn ku yeelatay barbaarintiisa. Astaanta Sawirka: Instagram
Ma ogeyd?… Waddanka ay waalidkii Ricardo ka yimaadeen, Cape Verde waa caan ku ah cimilada kuleylka kuleylaha, jasiiradaha foolkaane iyo cunnada macaan. Dalka waxaa laga helay inta u dhaxaysa 1460 iyo 1462 by badmaaxiinta Boortaqiiska, waa xaqiiq sharraxeysa sababta inta badan muwaadiniinteedu dibedda ugu jecel yihiin inay ku noolaadaan Boortaqiiska. Cape Verde ilaa Boortaqiiska waa cadaalad gaari wadid fudud oo loo maro Waqooyiga Atlanta.
Ricardo Pereira wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Cape Verde. Dhibcaha Muuqaalka: CapeVerdeIslands
Qiyaastii horaantii 1990 markii Ricardo Pereira uu dhashey, waxaa jiray tiro lagu qiyaasay 50,000 qof oo ah Cape Verdean asalka qaran ee ku nool Portugal. In kasta oo laga yaabo inaadan ogaan! Ricardo Pereira waa MA ciyaaryahanka kaliya ee asal ahaan kasoo jeeda Cape Verde. Ma ogeyd?… Halyeeyadii hore ee Man United, Cristiano Ronaldo iyo Luis Nani sidoo kale waxay asalkoodu ka soo jeedaa waqooyi-galbeed Afrika (Cape Verde).
Wixii Koray ee Lisbon waxay umuuqdeen: Ricardo Pereira wuxuu ku koray inta badan hooyadii, oo ku taal Lisbon, oo ah magaalada ugu weyn magaalada Boortaqiiska. Waa magaalo leh cillado iyo fursadaha. In kasta oo caruurta qaar ay ku dhiiradaan cadaadiska asxaabta ee xaafadooda dhibaataysan, kuwo kale sida Ricardo ayaa qaatay fursado isboorti oo ay magaaladu soo bandhigtay. The Lisbon wuxuu u dhashay waligiis ma iloobin kooxda isboorti ee magaalada maadaama uu aad u jeclaa kubada cagta markii uu yaraa.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Ricardo wuxuu xiiseynayay inuu kubbadda cagta u ciyaaro si xirfad leh isla xilligii uu daawanayay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee kubbadda cagta ee TV-ga. Goor hore, ayuu bilaabay wuxuu ku bartay meheraddiisa kubada cagta gudaha maxalliga ah ee Lisbon. Kaqeybgalka kubaddu waxay ahayd jidkiisa u gaarka ah ee uu isagu wax ku bari karo Shaqadiisii ​​hore ee adag waxay bixisay kadib markii uu aqoonsaday nin kubada cagta ah.
Da'da 10, Isboorti Isboorti (oo laga keenay Futebol Benfica, AKA Fofó) wuxuu kormeeray horumarka Ricardo wuuna u soo dhowaaday. Ciyaartoygu wuxuu waalidkiis kala hadlay baahida loo qabo in wiilkooda la geeyo Akadeemiyada Futebol Benfica oo ku saabsan rabitaanka waxbarasho kubada cagta oo ka wanaagsan. Waalidiintii Ricardo Pereira way oggolaadeen oo markii uu jiray 11, wiilkoodu wuxuu bilaabay inu galo akadeemiyada abaalmarinta badan leh ee ku taal xaafada Benfica ee Lisbon.
Ricardo Pereira Waxbarashada Hore ee Kubadda Cagta iyo Shaqada Buildup ee Xirfadda. Astaanta Sawirka:
Bixinta kubbadda cagta bilowga hore waxay ahayd wixii waalidkiis Ricardo ay isaga u dooneen. Intii uu kooxda joogay, Ricardo yaraa ayaa ilaalin jiray Manuel Fernandes (sawirka kore), waa ninka hogaaminayay aayaha kooxda muddo ka badan 30 sano.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Mudnaanta Hore
Bilowgii akadeemiyadda, Ricardo Pereira kama fikiri doono wax kale oo aan ahayn shaqo, diirad saaridna waligiisna kama quusan waa suurtagal. Xiligaas, dhalashada Lisbon iyo asxaabtiisa, noocyada ciyaartoy caan ah sida; Gelson Martins, Rúben Semedo, dhammaantood raacay raadadkii Robinho.
Guushii ugu horreysay ee isboorti ee Ricardo wuxuu ku yimid tartan tartan ah halkaas oo uu had iyo jeer isku dayi lahaa inuu ku daydo tilmaanta iyo taabashada sanamkiisa (Robinho) kii uu kor u eegay. Isagoo leh xoog aan caadi aheyn da'da yar, prodigy yar wuxuu arkay naftiisa oo ku sii kordhaya darajooyinka akadeemiyada. Hoos waxaa ku yaal sawir naadir ah oo Ricardo ah inta lagu gudajiray sannadihiisii ​​hore Futebol Benfica sanadka 2002.
Ricardo Pereira Nolosha Hore ee Kubadda Cagta- Maalmihiisii ​​Futebol Benfica. Astaanta Sawirka: Instagram
Sida horumarkiisa markii uu ahaa, Ricardo wuxuu bilaabay inuu helo kun euro, ka dib, wuxuu bilaabay inuu helo 2,000 kale markii uu kor u sii socday. Saddex sano kadib, Ricardo wuxuu sii waday howshiisa qaan-gaarnimada kubada cagta, oo leh akadeemiyada Sporting CP halkaas oo uu ku qaatay sanado dheeri ah oo ah 6.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Waddada Weyn
Goorta Going Got Tough: Da'da 17, waqtiga uu ku dhowaa inuu qalin jebiyo isaga oo leh rajo sare oo ah inuu galo kubbadda cagta sare, nasiibdarro ayaa dhacday. Poor Ricardo Pereira waxaa siidaayay Sporting CP. Halkii uu ka tanaasuli lahaa riyadiisa, kubadsameeyaha la diiday wuxuu ku biiray Associação Naval 1º de Maio, oo caan ku ah Badda, naadi kubbada cagta oo yar oo kuyaala magaalada figueira da Foz. Sannad kadib, wuxuu u wareegay Vitória Guimaraes, oo ah koox loo yaqaanay inay shaqaaleyn u noqoto kooxaha waaweyn ee Portugal. Intii uu kooxda ku sugnaa, Ricardo wuxuu helay ka mid noqoshada kooxdooda waa weyn.
Ricardo Pereira wuxuu ku adkeystay bilaw adag oo uu ku bilaabay kooxda waa weyn. Ciyaar xumada awgood, Ricardo waxaa loo tuuray Vitória Guimarães B (kooxda kaydka ee Vitória Guimarães) in muddo ah. Halkii uu mar kale ka tanaasuli lahaa riyadiisa, dhallinyardii yaraa ayaa go'aansaday inuu la dagaallamo jidkiisa si uu u soo celiyo ixtiraamka maamulkiisa. Ugu dambeyntiina, waxaa jiray horumar la taaban karo oo ku soo laabtay shaqadiisii ​​sare.
Ricardo Pereira wuxuu ka shaqeeyey sidii uu ugu soo noqon lahaa kooxda koowaad ee Guimarães ka dib markii hore loogu tuuray kaydka. Dhibcaha Sawirka: Marchadovapor-Blogspot iyo JovensPromessasBlog
U noqoshada Halyeeyga Finalka Koobka: Ricardo wuxuu ogaa in kooxdiisu aysan ku fiicnayn ku guuleysiga Horyaalka Portuguese-ka ee Primeira Liga. Sidaa daraadeed, wuxuu si buuxda u qaatay tamartiisa buuxda ee daabacaadda '2012 – 13' koobkii Koobka Boortaqiiska, istiraatiijiyad ayaa bixisay.
Ma ogeyd?… Ricardo wuxuu noqday FINAL HERO gudaha 2012-2013 Koobka Portuguese ee showgarce final. Wuxuu ka dambeeyay guushii 2 – 1 ee finalka kulankii ay ka hortageen kooxda SL Benfica. Ciyaartii finalka, waxa uu la shaqeeyaa goolhayaha Benfica Artur Moraes isagoo darbo dheer meel fog ka geliyay si uu dareenkiisa ugu hor mariyo kooxdiisa isagoo sheeganaya koobkiisii ​​ugu horreeyay ee abid.
Ricardo Pereira wuxuu ka caawiyay kooxdiisu inay ku guuleysato 2012-2013 Taça de Portugal. Astaanta Sawirka: IG
Markay Awoodda Socoto In kastoo Mar Kale: Inaad noqoto xiddig xiddig isla markaana ku guuleysiga koobka Portuguese waxay ahayd qorshe ku habboon Ricardo inuu ku biiro koox weyn. 16th of April 2013, kahor intaanu xilligu dhammaan, Ricardo Pereira wuxuu ku biiray FC Porto iyadoo rajo weyn laga qabo garbihiisa.
Mar kale, Waxyaabaha sidii loogu talagalay uma socdaan waxayna ahayd waqtigi ay kooxdiisu ku jirtay xilli isbeddel weyn. Liidasho Ricardo oo u ciyaari jiray dhanka weerarka ayaa si lama filaan ah u lumiyey awoodihii weerarka oo dhan oo ay si cad ugu muuqatay kooxdiisii ​​hore ee Guimarães.
Markay Awoodda Go to adka u leedahay Ricardo Pereira- Sawirka Sawirka: Ionline Sapo
Waqtigii uu lumiyay tayadiisa weerarka, halyeeyga Lisbon wuxuu muujiyay horumar dhanka daafaca ee ciyaartiisa. Tani waxay ka dhigtay inuu Maareeye (Paulo Fonseca) ka beddelo dhanka garabka buuxa ee daafaca buuxa, booska uu ka ciyaaro waqtiga qorista.
In kasta oo la beddelay, caqabadaha Ricardo ayaa sii socday. Xitaa sidii daafaca dambe, waxaa jiray tartan lala galay Danilo asaga oo la tartamaya. Markii Danilo uu aaday Madrid, Pereira booskiisa weli lama uusan dammaanad qaadin madaama Maxi Pereira, laga soo iibsaday Benfica ayaa laga soo xulay booskiisa. Isagoo dooranaya meeshii ugu dambeysay, Ricardo wuxuu go’aansaday inuu kooxda kaga tago amaahda.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Kusoo caan bax
Ricardo Pereira waxaa amaah lagu siiyay labo sano kooxda reer France ee OGC Nice halkaas oo uu ka sii watay booskiisa daafaca. Halkii ay u burburin lahaayeen, difaacu wuxuu ka soo koray xooggiisa oo xoog u weynaaday. Gudaha muddo toddobaadyo ah, Ricardo Pereira wuxuu ka tegey nin la illoobay ee FC Porto isagoo ka mid noqday muujinta ugu weyn ee Ligue 1. Markii uu joogay naadiga, wuxuu helay caan iyo caan.
Ricardo Pereira koritaanka cajiibka ah ee Nice. Dhibcaha: HITC
Ka dib markii uu amaah ku qaatay kooxda, Ricardo wuxuu bilaabay inuu dareemo baahida loo qabo inuu u baxo deegaan cusub. U guuritaanka Ingiriiska si uu ugu biiro Leicester ayaa noqotay kor u qaadida kalsoonida maadaama dhalashada Lisbon uu ku faraxsan yahay dhaqanka Ingriiska, habka tababarka kooxda iyo caado ahaan.
Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Leicester, awoodda daafaca ee Pereira wuxuu ka caawiyay kooxdiisu inay dhaliso kaliya gooldhalinta 34 xilli ciyaareed, waana tiro la ixtiraamo oo ka jirta kooxda heysata horyaalka dhexe, kana fiican Manchester United iyo Arsenal. Dhamaadka xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay, Ricardo ayaa loo codeeyay Cayaaraha 2018 / 2019 Leicester ee Xilliga iyo waliba abaalmarinta loogu talagalay Cayaaraha Leicester Cayaaraha 2018 / 2019.
2018-2019 Cayaaryahanka Leicester City iyo Cayaaryahanka Cayaaryahanka xilli ciyaareedkii. Astaanta Sawirka: Twitter
Ku guuleysiga abaalmarinadan ayaa kalsooni u aheyd Ricardo Pereira kor u kaca meteoric ee caannimada ayaa sii wadaya xilligii 2019 / 2020. Xitaa booskiisa daafaca dambe, gardarrada Pereira iyo isku xirnaanta ayaa gacan ka geysatay sidii ay dib ugu riixeyn laheyd kooxdiisii ​​hore ee Champions League.
Maskaxda ku haya taageerayaasha kubada cagta ee Portugal iyo adduunka guud ahaanba, Ricardo Pereira Xaqiiqdi waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican khadka wax soo saarka aan dhamaadka laheyn ee daafaca dambeedka midig ee cajiibka ah kuwaasoo magac ku yeeshay kubada cagta. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Xiriirka
Dhab ahaan nin kasta oo guuleysta, waxaa ku sugan naag naxdin leh oo indhaha duubtay. Guul laga gaaro iyo sare u kaca baahida weyn ee kubada cagta Ingariiska, waxaa hubaal ah in qaar ka mid ah taageerayaasha kubada cagta ay aheyd inay weydiiyaan hadii Ricardo Pereira inuu leeyahay gabar saaxiib ah ama xaas. Ma jirto wax dafiraya xaqiiqada ah in quruxdiisa muuqaalka ay weheliso qaab ciyaareedkiisa uusan ka yeeli doonin inay la jeclaadaan dumarka.
Waa kuma Ricardo Pereira Gabadha Saaxiibka ah ?. Sawir-amaahda Instagram
Sida aan ognahay, Ricardo Pereira ayaa qoyskiisa ka tagay si uu u qaato doorkiisa Premier League. Boortaqiiska ayaa u guuray England kaligiis, isagoo aan la qabin naag, gabar saaxiib ama caruur toona. Sida waqtigii qorista, waxay umuuqataa inuu doorbiday inuu diirada saaro shaqadiisa, isagoo xajinaya xiriirka xiriirkiisa si sir ah sida looga fogaado iftiiminta. Isagoo xukumaya da'diisa iyo qaangaarnimadiisa, Ricardo Pereira wuxuu lahaan karaa gabar saaxiibtinimo laakiin wuxuu door bidaa inuu xiriirkiisa ka dhigo mid aad u gaar ah.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Naftaada Shaqsiga
Inaad barto nolosha Ricardo Pereira noloshiisa gaarka ah meel ka baxsan garoonka waxay kugu caawineysaa inaad hesho sawir wanaagsan oo ku saabsan shaqsigiisa. Bilaabidda, waa qof rumeeya ereyada dhaha… "Muhiim ma ahan cidda adiga ku dhoola cadeynaya, laakiin yaa kula joogaya markii aadan dhoola-caddeyn karin".
Barashada nolosheeda shaqsiga ah ee Ricardo Pereira meel ka fog Kubadda Cagta. Sawir-amaahda Instagram
Ricardo Pereira wuxuu isticmaalaa ereyadan shucuureed si uu uga tarjumayo halgankiisii ​​hore ee shaqo, kaas oo ay ka buuxdo diidmo iyo gaabis badan. Waqtiga qoraalka, waa xaalka xaalad lagu soo bandhigo isaga Instagram page.
Sidoo kale noloshiisa shaqsiyeed, Ricardo waa qof go'an oo go'aan qaadasho leh, qof baari doona ilaa uu ka helo runta u horseedi doonta guul. Shakhsi ahaan, wuxuu leeyahay waddan madaxbanaanidiisa gudaha ah taasoo u sahaneysa horumar la taaban karo labadaba noloshiisa shaqsiyeed iyo xirfadeed.
U ekaanta eyga: Ciyaartoyda kubada cagta, iyo wixii la mid ah Lionel Messi, Alexis Sanchez, Mesut Ozil iyo Neymar, jeclaado eeyaha iyo Ricardo Pereira ma aha ka reeban. Xitaa adigu waxaa jira odhaah ah inuusan jirin wax daacada ah oo ka haray ciyaarta casriga ah, runtii ma tixgalineyso xiriirka ka dhexeeya xiddiga reer Portugal iyo eeygiisa.
La kulan Ricardo Pereira ee Dog. Astaanta Sawirka: Instagram iyo Twitter
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Qoyska
Ricardo Pereira, furaha u noolaanshaha nolol farxad leh ayaa ah in la helo isku-dheelitir fiican, oo la micno ah inuusan u dhaaran doonin ballanqaadyada kubadda cagta isaga oo aan u dejin wakhti ku filan hooyadiisa uu jecel yahay. Ricardo's Pereira hooyadiisa waqtiga qorista waxay ku dhacdaa waa xubinta kaliya ee qoyska ee degelkiisa. Hoos waxaa ku yaal sawirka hooyo iyo wiil labadaba markay booqdeen Buckingham Palace.
Ricardo Pereira waxaa ku sawiran hooyadiis. Astaanta Sawirka: Twitter
Si ka duwan hooyadi Pereira, aabihiis, walaalkiis iyo walaasha ayaa dhamaantood sameeyay go'aan xasaasi ah oo aysan raadin aqoonsi dowladeed.
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - nololeedka
Marka ay timaado qaab nololeedka, Ricardo Pereira wuxuu leeyahay karti uu ku ilaaliyo isku dheelitirka kharashka iyo keydinta lacagaha. In kasta oo uu kasbado lacag dhan £ 3.6 milyan mushaharka sanadlaha ah, haddana waa la edbiyaa oo ku filan in miisaaniyaddiisa lagu dhejiyo. Markaad dhex marto warbaahinta bulshada, ma jiraan wax calaamado ah oo muujinaya in uu leeyahay qaab nololeed qurxoon oo si fudud looga dareemi karo gacanta baabuurta qalaad, guryo iyo xiro aad u qaali ah. Sida hoos ku xusan, Ricardo Pereira kaliya wuxuu ku qarash gareeyaa lacagaha ku baxa madadaalada biyaha iyo jimicsiga.
Ricardo Pereira wuxuu ku qarash gareeyaa lacagaha madadaalada iyo jimicsiga. Astaanta Sawirka: Twitter iyo Instagram
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Darawalka Jinsiyada: In kasta oo inta badan ciyaartoydu ay jecel yihiin inay ciyaaraan golf ama FIFA, waxaa jira kuwa iyagu aad uga fikir badan marka ay raadinayaan waxyaabo ka fog garoonka. Ricardo Pereira waa mid ka mid ah kuwa leh hiwaayad kale oo aadan ubaahneyn inaadan fileynin. Ma ogeyd?… Waa nin khabiir ku ah orodka Kart ee ka socda Daytona Tamworth.
Ricardo Pereira waa taageere motorsport ah kaasoo u soo muuqday munaasabadda daytona motorsport. Astaanta Sawirka: Twitter
Danjire Brand & Arday ka tirsan Jaamacadda UK: Ciyaarta quruxda badan ee kubada cagta waxaa ku dhaca aragtiyo madadaalo ah oo ay dad badani qabaan in ciyaartooyda kubada cagta aysan aqoon laheyn, aadna u xariifsaneyn oo ay caan ku yihiin kaliya shukaansiga shukaansi gabdhaha saaxiibada ah iyo dagaalka. Si qoto dheer u qodista, waxaan ogaanay in Ricardo Pereira uu ka mid yahay ciyaartoydan caqliga leh ee caan ku ah sirdoonka isla markaana maskax badan ku leh tayadiisa.
Ricardo Pereira Jacaylka kombiyuutarada iyo daraasadaha. Astaanta Sawirka: DMU
Sida lagu sheegay warbixin, isagu waa arday khadka tooska ah ka dhigta jaamacadda De Montfort University, jaamacad dawladeed oo ku taal magaalada Leicester, England. Ricardo Pereira ayaa ka qaatay dhiirrigelintiisa Wilfred Ndidi, oo ah safiir kale oo loo yaqaan astaanta sumcadda kaasoo waqtiga qorista wax ku baranaya in uu ka helo shahaadada ganacsiga iyo maaraynta jaamacadda.
Maamuusayaasha oo Kooban: Inta badan taageerayaasha kubbadda cagta oo aad ka mid tahay markaad aqrinaysid maqaalkan waxaa laga yaabaa inay bartaan Ricardo Pereira inta lagu gudajiray xilli ciyaareedkiisii ​​2018 / 2019 miro dhal ee Leicester City FC. Hoos waxaa ku yaal muuqaal ah wixii uu ku soo qabtay waqtigiisii ​​Leicester.
Ricardo Pereira Lambarka Maamuusta. Astaanta Sawirka: LeicesterMercury
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Taariikhda Caruurnimada Ricardo Pereira iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.